ကျွန်ုပ်၏ Xiaomi ကို MIUI 8 ကိုအဆင့်မြှင့်နိုင်ပါသလား။ ဤနေရာတွင်သံသယမှထွက်ပါ Androidsis
လာမည့်ဇူလိုင်လ 11 ကုမ္ပဏီ Xiaomi က ၏ပထမ ဦး ဆုံးအများပြည်သူ beta ကိုဖြန့်ချိမည် MIUI 8; နောက်တစ်လအကြာသြဂုတ်လ ၁၆ ရက်နေ့တွင်ပထမဆုံးတည်ငြိမ်သောဗားရှင်းကိုစတင်ရန်စီစဉ်ထားသည်။ ယခုအချိန်တွင်သုံးစွဲသူများအနေဖြင့်သူတို့၏ operating system ဗားရှင်းအသစ်သို့၎င်းတို့၏ terminal များကိုမွမ်းမံခြင်းရှိ၊
Android panorama မှာအများဆုံးကြိုက်တဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုအကြောင်းပြောရမယ်။ Xiaomi က။ ဒီတစ်ခါတော့မင်းတို့ပြောဖို့ငါတို့လုပ်နေတယ် ဘယ် MIUI 8 ကိုအဆင့်မြှင့်ထားသလဲ.
ဆိပ်ကမ်းများ Xiaomi က သူတို့ကဂူးဂဲလ်ရဲ့ operating system Android နဲ့အလုပ်လုပ်တယ်။ ဒါပေမယ့်တရုတ်ကုမ္ပဏီက MIUI လို့ခေါ်တဲ့စိတ်ကြိုက်အလွှာတစ်ခုကိုပုံနှိပ်ထုတ်သည်။ အထူးသဖြင့်ဒီဇိုင်းအရ၊ Android ထက် iOS နှင့်ပိုမိုနီးစပ်သည်။
၎င်း၏အh္ဌမဗားရှင်း MIUI ကိုလုံးဝဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားပြီး application များ၏ထပ်တူများကဲ့သို့စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းသောရွေးချယ်စရာများရှိသည်။ သင်၌ Facebook၊ WhatsApp နှစ်ခု၊ Telegram နှစ်ခု၊
သူတို့က "Second Space" ကဲ့သို့သောအခြားစွမ်းဆောင်ချက်အသစ်များကိုလည်းမီးမောင်းထိုးပြနိုင်ပြီးအသုံးပြုသူနှစ် ဦး သည်တူညီသောတက်ဘလက်ကိုသုံးနိုင်သော်လည်းသီးခြားစီအသုံးပြုနိုင်သည်။
ဒါပေမဲ့ MIUI 8 ကျနော်တို့ပြီးသားသင်တို့ကိုပြောသည်သောများစွာသောနောက်ထပ်သတင်းများပါဝင်သည် Google မှာ.
သေချာတာပေါ့၊ မင်းမှာစမ်းကြည့်ချင်တဲ့စိတ်တွေအများကြီးရှိတယ်၊ မင်းကံကောင်းတာပဲ Xiaomi က ၎င်းသည် ၄ ​​နှစ်ကျော်သက်တမ်းရှိကိရိယာများကိုအဆင့်မြှင့်တင်ခွင့်ပြုသည်။ မယုံနိုင်စရာလား ငါတို့ကုမ္ပဏီကိုချစ်ရတဲ့နောက်အကြောင်းရင်းတစ်ခု။
အကျဉ်း Xiaomi ထုတ်ကုန်အားလုံးသည် MIUI 8 ကိုအဆင့်မြှင့်နိုင်သည်တစ်ခုပြီးတစ်ခုကြည့်ရအောင်
Xiaomi က Mi 2
Xiaomi က Mi 2S
Xiaomi က Mi Note
Xiaomi က Redmi Note ကို
Xiaomi က Redmi3Pro ကိုမှတ်ချက်
Xiaomi က Redmi 1S
Xiaomi က Redmi 2
Xiaomi က Redmi 3
Xiaomi က Redmi3Pro ကို
အသုံးပြုသူများသည် Xiaomi က ငါပြောခဲ့သလိုပဲသူတို့ဟာကံကြမ္မာကိုခံစားနေကြရတယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » ကျွန်ုပ်၏ Xiaomi ကို MIUI 8 ကိုအဆင့်မြှင့်နိုင်ပါသလား။ ဤနေရာတွင်သံသယများထဲကရယူပါ